एकै घरका १२ दिदि बहिनि एका एक भए भाइरल। एउटा बाउको १२ बैनी छोरि एकै साथ मिडियामा। (भिडियो हेर्नुहोस्) - Onlines Time
एकै घरका १२ दिदि बहिनि एका एक भए भाइरल। एउटा बाउको १२ बैनी छोरि एकै साथ मिडियामा। (भिडियो हेर्नुहोस्)
September 13, 2021 onlinestimeLeaveaComment on एकै घरका १२ दिदि बहिनि एका एक भए भाइरल। एउटा बाउको १२ बैनी छोरि एकै साथ मिडियामा। (भिडियो हेर्नुहोस्)
लोक गायिका विष्णु माझीको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्याङजा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले माझीको माइती घरमा पुगेर सोधपुछ गरेको हो।
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा माझीलाई बन्धक बनाएर राखेको र न्याय दिलाउनुपर्ने भन्दै प्रचार भएका छन्। यसैको कारण प्रहरील यसबारे जानकारी लिनको लागि माझीको माइतीघर पुगेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख होविन्द बोगटीले दिएको जानकारी अनुसार माझीको माइतीघर पुग्दा कोही नभएको र ढोकामा ताल्चा लगाइएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौखिक आदेशबाट नै माझीको माइतीघरमा पुगेको बोगटीले बताए।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई यसबारे केही जानकारी नभएको सुचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन्। माझीको बारे सिडियोसँग पनि कुनै छलफल नभएको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेलले पनि आफुले माझीको अवस्थाबारे बुझ्न कुनै आदेश नदिएको बताएका छन्। पिडित आफैँले उजुरी नदिएसम्म घटनाको अनुसन्धान गर्न नसकिने पोखरेलले जानकारी दिए।
दुई वर्ष अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौला र प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्सालको सक्रियतामा माझी, उनका पति सुन्दरमणि अधिकारी, बाबा ताराबहादुर माझी, आमा धर्मकुमारी माझी र दाजु बाबुराम माझी प्रशासन कार्यालयमा आएका थिए।
म*र्न तयार छौ तर MCC पास हुन् दिनौ भन्दै विप्लप समुहका हजारौ उत्रिए सडकमा , सडक नै क’ब्जा गरे (No MCC लेखेर सेयर गराै)
कठै अंकल हामीलाई न’मार्नुस भनेर हात जोडेका रहेछन, सबैलाई रू’वाउने ति बच्चाको पि’डा (भिडियो हेर्नुहोस)
टीका सानू लाई दोहोरी सिकाउने गुरु ईट्टा बोक्दै : कसरी भयो यस्तो ? Tika Sanu Khim biswakarma
January 1, 2021 January 1, 2021 onlinestime
एक्कासि सदिच्छा लाइ के भयो? यसरि फसाईदै छ भन्दै अमेरिका बाट किन यस्तो भनिन!
April 13, 2021 onlinestime
रवि लामिछाने को व्यक्ति हो र ? अब द’ही जमा’एर बसि’दैन , चाडै ठे’गान ला’इनछ – खुश्बु घिमिरे (उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?)
July 6, 2021 July 6, 2021 onlinestime